Is Flounder Ihove Yemvura Inotonhora - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Is Flounder Ihove Yemvura Inotonhora
Mvura inotonhora yeflounder?
Ndeipi hove yemvura inotonhora yakanakisa kudya?
Chii chinonzi hove dzemvura inotonhora?
Imhandoi yehove inonzi flounder?
Flounder yakaita sei tembiricha?
Unobhururuka sekunze kunotonhora here?
Flounder ihove yakanaka kudyiwa here?
Ndedzipi hove ina dzisingatombofaniri kudyiwa?
Ndeupi musiyano uripo pakati pehove dzemvura inotonhora nehove dzemvura inodziya?
Ndedzipi hove dzinogona kugara mumvura inodziya?
Chii chinonzi hove yemumvura inodziya?
Ndeipi hove dzakachena?
Ko flounder ihalibut?
Ndeipi iri nani cod kana flounder?
Ndeupi musiyano pakati pe sole neflounder?
Flounder inoenda kupi munguva yechando?
Ndeipi nzvimbo yakanaka yekubata flounder?
Flounder inorembera kupi?
Kuredza flounder kwakanaka munguva yechando here?
Unogona here kuredza flounder munguva yechando?
Ndeupi musiyano pakati pezhizha nechando flounder?
Iyo flounder yakatetepa here?
Zvakanaka here kudya flounder mazuva ese?
Ndezvipi zvinobatsira zveflounder?
VAMWE varairi vemvura yemunyu yekuEast Coast vari kushingirira mhepo dzomuchando muna March vachitsvaka flounder yechando, rudzi rwemvura inotonhora runooneka kumadokero kweLong Island Sound kazhinji kazhinji pedyo neZuva reSt.
Winter flounders ihove dzemvura inotonhora zvikuru. Muchokwadi, ivo havasi kungobudirira mumvura inotonhora, hove iyi inobereka mumvura inotonhora, apo mvura inowanzotonhora-inotonhora munguva yechando uye muchirimo, kutanga kwaDecember muNorth Carolina uye pakupera kwaJune muGulf of St.
Hove dzinogara mumvura yakasviba, inotonhora dzine mwero wepamusoro weOmega 3's. Salmon, sardines, rainbow trout, anchovies, bass, herring, uye tuna zvitubu zvakapfuma zve omega 3 fatty acids.
Hove dzemvura inotonhora dzinosanganisira salmon, tuna, mackerel, herring, trout, anchovies uye mamwe marudzi. King mackerel, tilefish, swordfish, bigeye tuna uye shark ndidzo dzepamusoro mumercury, inoyambira FDA.
Flounders iboka remhando dzeflatfish. Ihove dzedemersal, dzinowanikwa pasi pemakungwa pasi rose; mamwe marudzi achapindawo mumakova.
Iyo yakanyanya tembiricha yemvura yekubata marudzi ese eflounder kazhinji iri pakati pe55-68º F, kunyangwe paine mimwe misiyano inocherechedzwa mukupisa kwemvura kunofarira pakati peflounder yeAtlantic, Pacific, uye mvura yekumaodzanyemba kweUnited States.
Speckled trout, redfish uye flounder - mhando dzekutanga dzemumahombekombe - semamiriro ekunze anotonhorera. Zvisinei, kana kunze kwave kutonhora zvakanyanya, nzvimbo dzekurova kwehove idzi dzinodzikira.
Zvokudya Zvokudya uye Mabhenefiti Eutano. Inowanikwa pazasi pemakungwa nemakungwa, Pacific Flounder ihove yakanakisa kuve nekudya kwemanheru sezvo ichipa kuravira kunoshamisa uye ine hutano.
Kugadzira iyo "usadye" runyorwa ndiMambo Mackerel, Shark, Swordfish uye Tilefish. Ese mazano ehove nekuda kwekuwedzera mercury mazinga anofanira kutorwa zvakanyanya. Izvi zvinonyanya kukosha kune vanhu vanotambura vakaita sevana vadiki, vakadzi vane pamuviri kana vanoyamwisa, uye vakuru vakuru.
Hove dzemvura inodziya dzinowanikwa munzizi, hova, madziva uye munyanza. Hove dzemvura inotonhora dzinowanzowanikwa mumakungwa. Hove dzemvura inotonhora dzinowanikwawo mumadziva nenzizi asi kazhinji munzvimbo dzinotonhora zvikuru uye hadziwanikwi mumvura isina kudzika kakawanda sehove dzemvura inodziya.
Hove dzinogara mumvura inodziya ndidzo dzinowanzouya mupfungwa kune vazhinji varidzi vemadziva. Aya angave Largemouth Bass, Catfish, Bluegills kana Sunfish, uye Crappies. Ihove idzi dzinogara dzakasimba munzvimbo zhinji dzeUS uye dzinogona kurarama munguva yechando kuchamhembe.
MuOregon, "hove yemvura inodziya" zvinoreva muromo mukuru uye smallmouth bass, sunfish, crappie, channel catfish, bullheads, yellow perch, walleye uye hybrid bass. Hapana (kunze kwekunge Sacramento perch) inowanikwa kuOregon, asi vazhinji vanga varipo kubva pakupera kwezana remakore rechi19 kana kutanga kwezana remakore rechi20.
5 yeHove Hutano Hwakanyanya Kudyiwa Nemusango-Akabatwa Alaskan Salmon (kusanganisira yemumagaba) Sardines, Pacific (yakabatwa-musango) Rainbow Trout (uye mamwe marudzi eLake) Herring. Bluefin Tuna. Orange Roughy. Salmon (Atlantic, inorimwa mumapeni) Mahi-Mahi (Costa Rica, Guatemala & Peru).
Zvinoshamisa sezvazvinonzwika, Halibut iFlounder. Flounder izita rakajairika remhuri yese yeFlatfish, kusanganisira Turbot, Sole, Plaice, nezvimwe. Halibut chikamu chemhuri iyoyo.
Flounder ine chimiro chakapfava uye yakapfava, zvishoma inotapira flounder flavour. Nekuda kwekugadzirwa kwayo kwakapfava, flounder fillet iri kunetsa kubikira anotanga. flounder, cod inotora zvishoma zvishoma nokuti zviri nyore kudzidza kubika cod fillets pane flounder fillets.
Izwi rekuti “sole” rinoreva chaizvo hove dziri mumhuri yeSoleidae muhurongwa hwePleuronectiformes. Inomiririra 30 genera uye 130 mhuri dzehove. Izwi rekuti “flounder” rinoreva hove dziri mumhuri dzeAchiropsettidae, Pleuronectidae, Paralichthyidae neBothidae.
Winter flounder inotama ichibva kumahombekombe egungwa ichienda kumvura dziri pedyo nemahombekombe munguva yechando, ndiko kwavanowana zita ravo.
Sezvatataura, madhoki, piers, matombo uye mapilings ese inzvimbo dzakakosha uko flounder (fluke) inofarira kuisa uye kuvandira mhuka. Vanogona kubata hove dzakawanda uye kupa kuchengetedzwa kubva kune zvikara zvakadai sema dolphin, shark, nehove huru.
Vanogara kupi? Flounder ihove dzemvura yemunyu dzinowanzorembera padyo nemahombekombe, pamwe neEastern Seaboard, pamwe nemumakova, hova, nenzizi. Munguva yechando, vanotamira kugungwa uye havawanzodzokera kumvura isina kudzika kusvika muchirimo.
Kuredza flounder yechando kunogona kubereka semwedzi yechirimo nechirimo chero nguva yako nenzvimbo zvakangonaka. Nguva yechando inguva yekuberekesa flounder, uye unogona kuenda kumahombekombe kunovabata panguva ino. Kuredza kwechando flounder kazhinji kunoda kuti utsigire pasi.
Ehe, iwe unogona kubata flounder mumwedzi yechando asi uchafanirwa kunanga ivo kumahombekombe kana kutenderedza padyo nemahombekombe chimiro. Flounder inofamba ichienda kuGulf yeMexico neAtlantic Ocean munguva yechando kunobereka saka unogona kuenda kumahombekombe mamaira makumi matatu kana makumi mana kuti uzviwane mumwedzi inotonhorera.
Nyore: Nguva yechando Flounder yakasviba kupfuura Zhizha Flounder. Vanogona kutaridzika kunge vatema - saka zita ravo remadunhurirwa, "Blackback". Summer Flounder ishava rakajeka nekrimu kana makwapa machena. Maflounders anokwanisa kushandura ruvara kuti aenderane neakapoteredza, zvisinei, saka zviso zvawo ndiyo nzira yechokwadi yekuzvisiyanisa.
Magadzirirwo eFlounder akareruka uye akapfava, uye kunakirwa kwavo kwakapfava, nekunaka kutapira zvishoma, zvichiita kuti zvive nyore kushandisa mune dzakasiyana siyana. Inonyanya kufarirwa kubheka, broil, sauté, uye fry flounder.
Flounder / sole - kamwe pavhiki zvakanyanya.
Paunodya flounder, iwe uri kuwana akati wandei akakosha ekudya uye hutano hunobatsira. Chokutanga pane zvose, ihove yakaderera-mafuta, yakaderera-calori inoshanda zvakanaka sechitubu cheprotein kune vanhu vari kuedza kuderedza uremu. Vanokupawo kugovera kwakanaka kwevhithamini B, phosphorus, uye magnesium.
Chii Chinonzi Cold Water Hove
Chii Chinonzi Cold Water Hove Kudya
Mhinduro Yekukurumidza: Ndeipi Hove Yemvura Inotonhora Inogona Kugara Pamwe Chete
Ndeipi Hove Inogona Kugara Mumvura Inotonhora
Ko Anchovies Mvura Inotonhora Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Ndidzo Axolorls Cold Water Hove
Ko Cichlids Mvura Inotonhora Hove
Mubvunzo: Matatya Ihove Yemvura Inotonhora Here
Mhinduro Yekukurumidza: Ndidzo Neons Cold Water Hove
Mhinduro Yekukurumidza: Ndiwo Oscars Mvura Inotonhora Hove